မည်သို့ရန်အစီအစဉ်တစ်ဦးကတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခရီးစဉ်? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > မည်သို့ရန်အစီအစဉ်တစ်ဦးကတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခရီးစဉ်?
၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ် Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးနှင့်အလိုအလျောက်မှာတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား. ဒါဟာလာနှငျ့သငျအဖြစ်သွားကြဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကျေးဇူးပြုပြီးင်, စိတ်ကြိုက်အပေါ်ပိုရှည်တစ်နေရာတည်းနေဖို့, နှင့်စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်သွားပါ; သငျသညျနှောင့်အယှက်မပေးနိုငျခဲ့ပါလျှင်. သငျသညျစေရန်လိုအပ်မှသာလိုက်လျောကိုယ့်ကိုကိုယ်မှဖြစ်ကြသည်. ကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလာခေတ်ရေစီးကြောင်းအများအပြားအနက်, တစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ်ထိပ်အစက်အပြောက်ယူပြီးနေကြတယ်, ဒါပေမဲ့အကြီးအတစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ်အကြီးအတာဝန်လာနှင့်အတူ. သငျသညျသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုသိ, မည်သည့်အခြေအနေအကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်. ကမသွားသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ တစ်ဦးတည်းနည်းလမ်းများ သငျသညျရှေ့ဆက်-တှေးအချေါနှငျ့ပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်. အဆိုပါခေါငျနှငျ့အတူရပ်. အမှုအရာအနည်းငယ်သစ်တော်သီး-ပုံကိုသွားသည့်အခါ, သင်ကထွက် sort ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ပါးရည်နပ်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုမည်သို့စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်.
ရထားပို့ဆောင်ရေးသည် Eco-Friendly and လုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းရန်ခရီးသွား. thဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လူကြိုက်အများဆုံး Modes သာတစ်ခုမှာရန်ဖြစ်ပါသည် ရထားခရီးသွား. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြသငျသညျရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့ညှစ်နိုင်သောနေရာများမှာများစွာသောအရေအတွက်ကတက်ဖွင့်လှစ်. လူမှုဒြပ်စင်လည်းရှိပါတယ်, ကနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်အကြီးအလမ်းဖွင့် သူချင်းစွန့်စား လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်. ရထားတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားလည်းသူတို့ကိုသင်ဖြတ်သန်းအဖြစ်အမှန်တကယ်နေရာများနှင့်ရှုခင်းများကိုကြည့်ပါနိုင်စေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ရထားကာကွယ်ရထားဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်စုံလင်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏တဲ့ကောလာဟလလည်းရှိပါသည်, သင်၏နောက်စုံလင်သော Instagram ကိုဇာတ်လမ်းအဘို့ကြိုးစားကြ.
တစ်ဦးကကံကြမ္မာရွေးချယ်ခြင်း & ဘွတ်ကင်နေထိုင်ရန်
သင်သည်သင်၏တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားတစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ – Off-ရာသီစစ်ဆေး, အနည်းငယ်ထပ်မံသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဆန့်ကိုကူညီရသော. တစ်ခုလုံးကိုခရီးစဉ်ဥစ္စာပေမယ့်ဒါကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ထဲအတွက်ရှိခြင်း, ရာသီဥတုစစ်ဆေး! off-ရာသီအတွင်းအခြို့သောနေရာများရိုးရှင်းစွာ horrid နေကြသည်ကြောင့်စိတ်တွင်တိုးတက်မြင့်မားလာစျေးနှုန်းများပေးပို့နိုင်သောအဓိကဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါလိမ့်မယ်. နေရာထိုင်ခင်းများမပြတ်လပ်ရှိပါတယ်, သငျသညျခရီးသွားဆုံးဖြတ်နေရာတိုင်းမှာ, ဟိုတယ်များ, B က&B ကိုရဲ့, နှင့် Airbnb ရဲ့ကြွယ်ဝ. ညာဘက်သင်နှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်အဘို့အကြောင်းတ Pick.
အလိုအလျောက်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေမယ့်, အတူစတင်, အသေးစိတ်ခရီးစဉ်ကြိုးစားပြီ. ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Starting Point သို့င်. သင်တို့ကိုရွေးကောက်သနှင့်အချိန်ဇယားကိုတက်ထားပြီ destination သည်၏သော့ချက်ပျေါလှငျခွဲခြားသတ်မှတ်. တစ်ဦးရှိခြင်း၏ဂုဏ်အသရေခရီးစဉ်ကိုသင်လျှောက်တွင် go အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပြောင်းလဲမှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုစဉ်ကသငျသညျကိုလမျးညှနျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျအသေးစိတ်.
Stay ကို Safe
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပထမဦးဆုံး apter ဖူး. သင်တစ်နေရာအသစ်နှင့် unchartered ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, ဒေသခံရာဇဝတ်မှုပူအစက်အပြောက်များအောက်မေ့နှင့်သင့်သုတသေနပွု! သငျသညျအထဲကနေနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါ, လွင်ပြင်မျက်မှောက်ထဲကသင့်ရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုမှာဆင်းရှာဖွေနေန်းကျင်လမ်းလျှောက်ဖို့မကြိုးစား. သင့်ဟော်တယ်အမည်နှင့်လိပ်စာသင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်, လိုလိုမယ်မယ်. အချို့သောဒေသခံအရေးပေါ်နံပါတ်များနှင့်သင်သည်သင်၏အထူးသဖြင့်လိုရာခရီးအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်သုတေသနနေချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ပါနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်, ယဉ်ကျေးမှုလောကဝတ်အပေါ်အနည်းငယ်သုတသေနပွုအဖြစ်ကောင်းစွာ. အကောင်းဆုံးကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများတစ်ခုမှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ်ဦးနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်. သင်နှင့်သင့်အစီအစဉ်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာလူတွေသိပါစေ. သငျသညျလမ်းတစ်လျှောက်စေခြင်းငှါမဆိုအပြောင်းအလဲများအပေါ်သူတို့ကိုဒိတ်လုပ်ပါ.
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခရီးစဉ်: လမ်းတစ်လျှောက်သူငယ်ချင်းများ Make
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားသည်ကြီးနေစဉ်, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှစကားပြောစရာမလိုဘဲရက်ပေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားနေသောအကြောင်းပြချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့သေဆုံးသူယူနိုင်ပါသည်. ကံကောင်းတာက, သင်အပြောင်းအရွေ့အပေါ်အခါ, လူသစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပြောဆိုမှုများတက်ဒဏ်ခတ်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ရဲ့. ယုံကြည်မှု Be. သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖို့အကျွမ်းတဝင်ဝဲအဘို့အဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် shared အတွေ့အကြုံများပြီးပြည့်စုံဖြစ်ကြောင်းသတိရသင့်ရဲ့နားရွက်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ ရေခဲ-အနိုင်အထက် သူချင်းခရီးသွားများအတွက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့.
အခါသင်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား, သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အရာအားလုံးသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ခုမှာအတူသယ်မည့်အိတ်ပေါ်, သေတ္တာတစ်လုံး, သို့မဟုတ်သင်တစ်ပတ် (သို့) သုံးနာရီကြာခရီးသွားသည်ဖြစ်စေကျောပိုးအိတ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောခရီးဆောင်အိတ်ကြီးဖြစ်သင့်သည်. destination သည်များအတွက်ထုပ်ပိုး, ရာသီဥတုအဘို့စားဆင်ယင်, မူသောသင်တို့ဝန်ပေါ့သင့်တယ်. သင်ကသာအခြေခံလိုအပ်ချက်များထုပ်ပိုးနှင့်စုပြုံပြွတ်သိပ်ထားခဲ့ဖို့ခံစားရဘယ်လောက်ကောင်းမှာအံ့အားသင့်လိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့ကင်မရာကိုအမြဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်, လက်၌တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားနှင့်ဓာတ်ပုံသွားလာရင်းလက်.
သငျသညျတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားသို့နျဌာနခှဲဖို့လုံလောက်တဲ့သတ္တိရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးတည်းကိုစားရန်လုံလောက်သတ္တိရှိပါတယ်. နိုင်ငံအများအပြားမှာတော့, သင်တဦးတည်းဇာတ်လမ်းအဘို့စားပွဲကိုကွောကျရှံ့သောပါကနံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာဒီတော့ပိုပေါ့ပေါ့ဘက်မှာဖြစ်လေ့, ဤအမုန့်ညက်ကြိမ်နှင့်အတူစတင်. သင်နှင့်အတူစာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်တစ်ဂျာနယ် ယူ. တကယ်တစ်ဦးတည်းညစာစားသင့်ရဲ့အရာမပါလျှင်, ဒေသခံ meetup အုပ်စုများသို့ကြည့်. သငျသညျအစားကောင်းကြိုက်သူများ outings အတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်သင်အမှန်တကယ်လူအစုအဝေးကိုရှောင်ရှားချင်ချင်လျှင်အဘယ်သူသည်လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်, တစ်မီးဖိုချောင်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်မုန်တိုင်းထချက်ပြုတ်ကြောင်းတည်းခိုနေထိုင်ကြည့်.
သငျသညျစီစဉ်ကြသောအခါ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်, မိုဃ်းလင်းနာရီအတွင်းရောက်ရှိစီစဉ်ရန်ကြိုးစား. မှောင်မိုက်၌တစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောမြို့မှတဆင့်များနှင့် ပို. ပင်ဒါကြောင့်သင်တစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်လုပ်နေကြတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့လမ်းကိုရှာဖွေအတော်လေးစိတ်ပျက်အားလျော့ဖွယ်တာဝန်က. စီမံကိန်းကသင်၏တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားမစ်ရှင်တစ်ခုအနုစိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, အတူစတင်, သငျတို့သဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်စီးဆင်းသငျသညျတလျှောက်ရွှေ့အဖြစ်ပေမယ့်ဒီသေးငယ်တဲ့အသေးစိတျကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အချို့သောနယ်လှည့်လုပ်ဖို့ညာဘက်ရွေးချယ်မှုအောင်နှင့်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ်ရှိခြင်းနေ. သငျသညျ ပို. သိနားလည်နိုင်စွမ်းနှင့်သင့်ပတ်လည်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်. အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့အူဗီဇခရီးသွားလာနှင့်အသုံးပြုမှုတဲ့အခါမှာယုံကြည်စိတ်ချ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “မည်သို့ရန်အစီအစဉ်တစ်ဦးကတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခရီးစဉ်?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolo-travel-trip%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သင် / က de မှ / TR သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#traveleurope ဥရောပသမဂ္ဂ နေပြည်တော် SoloTrips ရထားခရီးသွား ခရီးသွား